Wasiir Ciise Xawar oo iska fogeeyey Eeddaha musuqmaasuq ah ee lagu soo eedeeye – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wasiir Ciise Xawar oo iska fogeeyey Eeddaha musuqmaasuq ah ee lagu soo eedeeye
Allhadaaftimo March 29, 2019 Uncategorized
Wasiirka gaashaandhiga JSL Axmed Ciise Xawar, ayaa markii u horaysay ka hadlay tuhunka musuqmaasuq ee uu hantidhawrku ku xidhiidhiyay wasaaradiisa.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Xasan Axmed Aadan ayaa dhawaan HCTV u sheegay in hantidhawrka qaranku u soo gudbiyay baadhis uu ku sameeyay wasaaradaha warfaafinta iyo gaashaandhiga, waxaanu sheegay inay xafiiska Xeer ilaalinta yaalaan dacwado musuqmaasuq oo ka dhan ah masuuliyiinta wasaaradaha gaashaandhiga iyo warfaafinta.
Hase yeeshee Wasiir Xawar oo shalay waraysi siiyay idaacadda Daljir ee ay xarunteedu tahay magaalada Garowe ee Puntland, wuxuu tuhunada musuqmaasuq ee lagu xidhiidhinayo ku tilmaamay kuwo dacaayad ah, “Waa wax iska dacaayadA, eed waxa ku eedayn kara xeer ilaaliyaha iyo maxkamadda; hantidhawrku eedayn ma laha ee soo jeedin ayuu leeyahay, wax la buun buuninayay ayay ahayd waxay ahaydna hadda way soo dhammaatay.” Sidaas ayuu ku jawaabay Wasiirku.
Mar la weydiiyay in maxkamadda looga yeedhay, wuxuu ku jawaabay “wax ka jiraa ma jiraan.”
Waxa uu wasiirka gaashandhigu sheegay in aanay Somaliland deeganada Sanaag Bari ciidamada u gayn in iska horimaad uu ka dhaco, waxaanu ku baaqay in la ilaaliyo nabada gobalkaas“Somaliland ujeedadeedu maaha in meel nabadgalyo iyo xasilooni ay ka jirto ay carqaladayso qolyaahaas Puntaland ka socdana sidaas ayaan ku dhiirigalinayaa inay nabadgalyada dhinacooda ka ilaaliyaan,deegaanka nabadgalyada ayaa u muhiim ah.”
Wasiirka ayaa la waydiiyay bal in biyo dhaamis ay ka galayaan xaalada abaareed ee gobalka Sanaag, wuxuu yidhi “Wixii biyo la’la gaadhi karo ee degdeg ah halkay joogaan iyo meeshay ku sugan yihiinba in biyo dhaamis degdeg ah lala gaadho weeyaan ahmiyada kowaad ee Somaliland waanan bilownay oo waad arki doontaan bari [maanta] ilaa maanta [shalay] inshaalah.”
Previous M/weynaha Somaliland oo magcaabay Taliye Nabadsugid oo Cudub
Next Baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa ka horyimid heshiiska ay raysal wasaare Theresa May ku doonayso inay kaga baxaan midawga Yurub
Guddiga doorashada Jubbaland oo jawaab kama dambeys ah siiyay Qaramada Midoobay August 18, 2019
Archives Select Month August 2019 (99) July 2019 (166) June 2019 (162) May 2019 (158) April 2019 (114) March 2019 (128) February 2019 (95) January 2019 (148) December 2018 (129) November 2018 (99) October 2018 (104) September 2018 (98) August 2018 (98) July 2018 (93) June 2018 (130) May 2018 (124) April 2018 (97) March 2018 (140) February 2018 (93) January 2018 (131) December 2017 (113) November 2017 (95) October 2017 (84) September 2017 (98) August 2017 (121) July 2017 (120) June 2017 (94) May 2017 (119) April 2017 (112) March 2017 (117) February 2017 (139) January 2017 (118) December 2016 (89) November 2016 (114) October 2016 (98) September 2016 (91) August 2016 (95) July 2016 (91) June 2016 (73) May 2016 (68) April 2016 (55) March 2016 (100) February 2016 (67) January 2016 (71) December 2015 (73) November 2015 (58) October 2015 (64) September 2015 (81) August 2015 (60) July 2015 (60) June 2015 (52) May 2015 (43) April 2015 (59) March 2015 (57) February 2015 (62) January 2015 (96) December 2014 (22) November 2014 (69) October 2014 (133) September 2014 (144) August 2014 (38)